अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू परिवर्तन मन पराउँदैनन् Martech Zone
अधिकांश प्रयोगकर्ताहरू परिवर्तन मन पराउँदैनन्
शनिबार, मार्च 21, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
म यस बारे मा धेरै पढ्दै छु फेसबुकमा नयाँ प्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइन र कति प्रयोगकर्ताहरूले परिवर्तनमा पछाडि धकेल्छन्, विडंबनाको रूपमा एउटा सर्वेक्षण फेसबुक अनुप्रयोगको रूपमा सुरू भयो.
तिनीहरू परिवर्तनहरू मनपर्दैन, तिनीहरूलाई घृणा गर्छन्:
धेरै जसो डिजाइन पढ्छ र अवलोकन गर्दछ कोही पनि, म सरल डिजाइनको प्रशंसा गर्दछु (मैले उनीहरूको दयनीय नेभिगेसनलाई घृणा गरें) तर म अलि अप्ठ्यारो छु कि उनीहरूले केवल चोरी गरे ट्विटरको सरलता र तिनीहरूको पृष्ठ एक धारा मा निर्माण।
म प्रक्रियाको बारे अनिश्चित छु कि फेसबुकले प्रयोग गरेको… पहिलो परिवर्तनमा उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नेमा के थोरै परिवर्तनलाई धकेल्न यति धेरै प्रयोगकर्ताहरू संलग्न छन्। I फेसबुक लाई सम्मान गर्नुहोस् जोखिम लिनको लागि। त्यहाँ धेरै कम्पनिहरू छैनन् जुन उनीहरूको ट्राफिकको मात्राले यो गर्दछ, खास गरी किनकि उनीहरूको वृद्धि अझै अपसिंगमा छ।
यो नोट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि परिवर्तन जहिले पनि गाह्रो हुन्छ। यदि तपाइँ अनुप्रयोगको लागि नयाँ प्रयोगकर्ता इन्टरफेस रोल आउट गर्नुहोस् जुन व्यक्तिले बर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ भने, ईमेलले धन्यवाद दिन नसक्ने आशा नगर्नुहोस्। प्रयोगकर्ताहरूले परिवर्तनलाई घृणा गर्छन्।
म फेसबुक प्रयोग विधिमा अधिक पढ्नको लागि हेर्दै छु। मेरो अनुभवले मलाई भन्छ कि उनीहरूले सम्भवतः केही शक्ति प्रयोगकर्ताहरू वा फोकस समूहलाई डिजाईन गर्नका लागि सूचीबद्ध गरे, केही मानवीय कम्प्युटर अन्तर्क्रिया र प्रयोगकर्ता अनुभव विशेषज्ञहरूलाई ठूलो 'ओल्ट स्टक पैसा तिरे, र बहुमत निर्णयको आधारमा योजना बनाए। यद्यपि बहुमतको निर्णयहरू चूस्छन्।
बहुमत निर्णयहरूले अद्वितीय व्यक्तित्वको लागि अनुमति दिँदैन। पढ्नुहोस् गुगल छोड्ने बारे डगलस बोम्यानको घोषणा, यो एक आँखा खोलने छ।
फोकस ग्रुप्स चूसो, कि त काम गर्दैन। त्यहाँ धेरै प्रमाणहरू छन् जसले सुझाव दिन्छ कि स्वयम्सेवा वा समूह फोकस गर्न भर्ती भएका व्यक्तिहरू समूहमा हिड्नका लागि आलोचना गर्न बाध्य छन्। कुनै पनि डिजाईन फोकस समूहहरूले एक महान, सहज र कट्टरपन्थी डिजाइन पछाडि उतार्न सक्छन्। फोकस समूहहरूले प्रयोगकर्ता ईन्टरफेसलाई कम से कम साधारण डिनोमिनेटरमा ल्याउँदछन् बरु केही नयाँ र स्फूर्ति दिदै।
किन फेसबुक परिवर्तन भयो?
फेसबुकको लागि अर्को प्रश्न - तपाईले जबरजस्ती परिवर्तनको लागि किन अप्ट गर्नुभयो? मलाई लाग्छ कि नयाँ डिजाइन र पुरानो डिजाइन दुबै प्रयोगकर्ताको लागि केहि सरल विकल्पहरूको साथ समावेश गरिएको हुन सक्दछ। तपाइँको प्रयोगकर्ताहरुलाई उनीहरूलाई जबरजस्ती गर्न को सट्टा उनीहरूको ईन्टरफेस को उपयोग गर्न शक्ति दिनुहोस्।
पुरानो नेविगेशन प्रणालीको जटिलता हटाउन नयाँ डिजाइन सुरू गरिएको हो भनेर म विश्वस्त छु। नयाँ प्रयोगकर्ताका लागि उठ्न र चालू गर्नको लागि यो अब धेरै सजिलो हुनेछ (मेरो विचारमा)। त्यसोभए - किन नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि यसलाई पूर्वनिर्धारित इन्टरफेस बनाउने र अनुभवी प्रयोगकर्ताहरूको लागि थप विकल्पहरू प्रस्ताव नगर्ने?
फेसबुकले अब के गर्छ?
फेसबुकको लागि अब (बहु) मिलियन डलर प्रश्न। खराब प्रतिक्रियाले खराब प्रतिक्रिया फिड गर्दछ। एक पटक नयाँ ईन्टरफेसमा सर्वेक्षण %०% नकारात्मक दरमा पुगेपछि, सावधान! यदि डिजाइन शानदार थियो भने पनि, सर्वेक्षण परिणामहरु डाउनहिलमा जान जारी हुनेछ। यदि म फेसबुकको लागि काम गर्दै थिएँ भने, म सर्वेक्षणमा ध्यान दिदिन।
फेसबुक गर्छ यद्यपि, नकारात्मक प्रतिक्रियालाई जवाफ दिनुपर्दछ। विडंबना हुनेछ जब उनीहरू दुबै विकल्पहरू प्रस्ताव गर्छन् र बहुसंख्यक प्रयोगकर्ताहरूले नयाँ रूप राख्छन्।
यसले थप विकास लिन्छ, तर म सँधै परिवर्तनहरू पुश गर्नका लागि दुई विकल्प सिफारिश गर्दछु। क्रमिक परिवर्तन or परिवर्तनको लागि विकल्पहरू सबै भन्दा राम्रो तरीका हो।
टैग: गुगल वेबमास्टर उपकरणहरूजयसोंन्डरहरूमोबाइल बजारमोबाइलसाइटमा एसईओअनसाइट एसईओprप्रेसप्रविधि
स्वीकृति सम्झौताको साथ अपेक्षाहरू सेट गर्नुहोस्
मार्क्स 21, 2009 मा 11: 25 PM
व्यक्तिगत रूपमा म केवल आशा गर्न सक्छु कि फेसबुक एक हजार मर्दछ र मर्छ। तर त्यो केवल विचार हो।
... एक प्रशंसक बाट
मार्स 22, 2009 मा 1: 34 एएम
एउटा कुरा निश्चित रूपमा निश्चित छ, जे भए पनि, व्यक्ति फेसबुकमा दुर्व्यसनी छन् र यसलाई प्रयोग गर्न जारी राख्छ!
यो डिजाईन "फरक" छ र म यसलाई प्राथमिकता दिन्छु किनकि यो पहिलेको भन्दा बढि सुव्यवस्थित छ।
तर, फेसबुकले प्रयोगकर्ताहरूलाई स्विच गर्ने कि नगर्ने विकल्प दिनुपर्दछ
मार्स 22, 2009 मा 8: 15 एएम
तर यो परिवर्तन अर्को फेसबुक परिवर्तनको हूलमा आयो। र मानिसहरूले त्यसलाई पनि घृणा गरेनन्?
त्यसोभए के अघिल्लो डिजाइनमा फर्कन लोबिंग गरिरहेका व्यक्तिहरू त्यस्तै व्यक्ति हुन् जुन अघि त्यो डिजाईनमा फर्कनको लागि पैरवी गरे?
मार्क्स 22, 2009 मा 7: 19 PM
परिवर्तनको साथ समस्या यो छ कि केहि नयाँ सिक्नको लागि आवश्यक कामको मात्रा तपाईलाई पहिले नै थाहा रहेको कुराको लागि जारी राख्नको लागि आवश्यक कामको मात्रा भन्दा धेरै ठूलो छ।
वर्षौं पहिले, मैले एक प्रमुख सफ्टवेयर अपग्रेड परियोजनाको नेतृत्व गरें र सबैजनाले पूर्णतया भयानक प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको पुन: डिजाइन गर्न चाहेका थिए। निस्सन्देह यो डरलाग्दो थियो, प्रयोग गर्न गाह्रो थियो, र आंशिक रूपमा मात्र कार्यात्मक थियो, तर हजारौं व्यक्तिहरूले यसलाई दैनिक प्रयोग गर्थे र यो कसरी काम गर्‍यो ठ्याक्कै जान्दछन्।
अन्ततः मैले अपग्रेडमा पुरानो ईन्टरफेस कायम राख्न टोलीलाई विश्वास गरें, तर विकल्प कुनै पनि प्रयोगकर्ताहरूलाई आमूल रूपमा सुधारिएको डिजाइनको प्रयास गर्नका लागि। बिस्तारै, सबैजना नयाँ डिजाइनको लागि सारिए।
यो पक्कै हो, फेसबुकले के गर्नुपर्‍यो। यसको सट्टामा, तिनीहरू प्रायः सबैलाई रिसाए।
मार्क्स 22, 2009 मा 8: 29 PM
मान्छे परिवर्तन लाई मन पर्दैन भन्ने धारणा पुराणकथा हो। वैज्ञानिक अनुसन्धानले वास्तवमा यसको विपरित देखाउँदछ।
रब्बीले भनेको कुराको आधारमा, यसलाई परिवर्तन गर्न बाध्य पारिएको छ जुन मानिसहरूले मन नपराउने र विरोध गर्ने छन्। राम्रो पोष्ट, डग!
मार्क्स 22, 2009 मा 9: 14 PM
हम्म - निश्चित छैन म सहमत छु कि यो एक मिथ्या हो, जेम्स। मानिसका अपेक्षाहरू हुन्छन् र जब ती अपेक्षाहरू पूर्ति हुँदैनन् यसले निराशा निम्त्याउँछ। मैले धेरै प्रिन्ट डिजाइनहरू र सफ्टवेयर पुन: डिजाइनहरूको माध्यमबाट काम गरें र जब पनि हामीले थोक परिवर्तन गर्‍यौं जसले प्रयोगकर्ताको व्यवहारलाई उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन गर्‍यो, तिनीहरूलाई यो मनपर्दैन।
सायद यो सबै अपेक्षाहरू सेटमा फर्कन्छ!
मार्क्स 22, 2009 मा 9: 45 PM
म मानव व्यवहारको बारेमा सामान्यीकरण गर्दैछु। त्यहाँ निश्चित अवस्थाहरू हुन्छन् जहाँ मानिसहरूले परिवर्तनलाई प्रतिरोध गर्छन्।
तर तपाईंको टिप्पणीले मेरो (र रोबीको) पोइन्टलाई धेरै ब्याक गर्दछ। यो बाध्यकारी परिवर्तन हो कि मानिसहरु चिन्तित हुन्छन्।
मार्क्स 22, 2009 मा 8: 52 PM
डग, म एक फेसबुक प्रयोगकर्ता हुँ, र मैले हेरेको आधारमा ती तीनै व्यक्तिहरू हुन् जसले केही महिना अघि लेआउट परिवर्तन गर्न मन पराउँछन् जो अहिले यी हास्यास्पद समूहहरू र फेसबुकको लागि याचिका बनाउँदैछन् जुन उनीहरूले नगर्ने लेआउटमा फिर्ता बदल्नको लागि। चाहँदैन। मेरो मतलब, c'mon। या त व्यक्तिसँग आफ्नो समयको लागि राम्रोसँग केहि छैन वा तिनीहरूले केवल ती प्रयोगकर्ताहरूको एक क्षेत्रको शोषण गरिरहेका छन् जसको हरेक परिवर्तनमा स्वचालित प्रतिक्रिया जहिले पनि कुनै कुनै राम्रो हुँदैन। यसलाई केही हप्ता दिनुहोस् र यी सबै हल्लाले सबै खाली कारणहरू प्राकृतिक तरीकाले जान्छ।
मलाई लाग्छ फेसबुक सफल हुनेछ, मान्छे फेसबुक प्रयोग गर्न जारी राख्नेछन्। मैले अहिले सम्म देखेका सबै परिवर्तनहरूले धेरै अर्थ लगाउँदछन् (कम्तिमा पनि)। ट्विटर-जस्तो धारा एक महान् चाल हो, र मानिसहरूले अझै पनि उनीहरूले पछ्याउन सक्ने छनौट गर्न सक्दछन् (मेरो लागि, यो आवेदन पोष्ट र गैर-अंग्रेजी पोष्टहरूको निर्मम फिल्टरिंग हो)। मेरो कुरा के हो भने फेसबुकले हामीलाई दुबै संसारको सब भन्दा राम्रो दिन्छ - साथीहरू र पृष्ठहरू / समूहहरूको वास्तविक समय ट्र्याकिंग र फिल्टरहरूको माध्यमबाट हाम्रो गोपनीयता र प्राथमिकताहरू राख्नको लागि क्षमता। एक थप बोनस पृष्ठहरूको माध्यम बाट मानिसहरूलाई आमन्त्रित गरेर मित्रता सीमा को वरिपरि जाने छ।
यो चिन्ताजनक पोस्ट को लागी धन्यवाद।
मार्क्स 22, 2009 मा 9: 15 PM
मलाई लाग्छ तपाईं ठीक हुनुहुन्छ - अवश्य नै एक 'नेतालाई पछ्याउनुहोस्' व्यवहार हो जुन अहिले भइरहेको छ।